Barlamaanka Somaliya oo diyaarinaya soo jeedin ka dhana ciidamada Kiiniya - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Barlamaanka Somaliya oo diyaarinaya soo jeedin ka dhana ciidamada Kiiniya
Shalay ayay ahayd markii xildhibaano diir Somali wata laakiin cadowga la raba badeena ay bilaa dal-kugal ku soo galeen dalkeena ayagoo ka soo degay garoon ay maamusho askarta Kiiniya ee magaalada Kismaayo.
Dawlada Somaliya ayaa sheegtay in diyaaradii ka duusha Kismaayo oo ciidanka Kiiniya haystaan ay soo marto Muqdisho si la midana ta u socota ay soo marto Muqdisho laakiin Kiniya way jebisay amarkaas laba mar.
Iyada waxa u muuqda halkii ay ka qasi karto kiiska badda ee yaala maxkamada Holland waana ta ay u jebisay amarka dawlada ayuu yiri Cali Calasow. Somaliya way awoodaa inay dhulka soo dhigto diyaaradaha yaryar laakiin wey ka gaabsatey.
Haddaba xildhibaano ka tirsan barlamaanka Somaliya ayaa diyaarinaya soo jeedin ka dhana Kiiniya oo hadda taageero keliya ka haysata Axmed Madoobe oo shalay is caleemo saaray.
Waxa la sugaa waa halka uu gaaro soo jeedintaas ayadoo xaalada Kismaayo waxba iska bedelin haddii Axmed Madoobe is caleemo saaro iyo haddii kalaba maadaama Kiiniya joogto.